Ongororo yeBhuku: Batman - Nyika yeRima Knight - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 22, 2022 | Ongororo dzebhuku, nhau, pamusoro
Chikamu 81%Chikamu 81%
DC Batman - iyo nyika yerima knight ndiro zita remusanganiswa mutsva wakagadziridzwa nekuburitswa naDK Verlag. Bruce Wayne akazova sei Batman? Ndivanaani vavengi vakaipisisa vezviremwaremwa? Uye: Sei Joker akapiwa mubayiro wekutendeseka kwake? Mibvunzo inonakidza yakatenderedza rima knight, uyo asiri gamba mune yekirasi pfungwa. Iyo Batman Compendium inopindura yakawanda yeiyi mibvunzo, kusanganisira inodarika mazana masere ekutanga emifananidzo enyambo.
Tichitenda kufirimu idzva rinonzi The Batman, haasi Robert Pattinson chete adzoka pachitarisiko, asiwo chiremwaremwa pachacho.Kunyange musiki Bob Kane angangodaro asina kufungidzira kuti munhu wemakatuni akagadzirwa muna 1939 rimwe zuva achave ane mukurumbira zvakadaro. Muna Chivabvu wegore iro, iyo Dark Knight yakatanga kuoneka mune imwe nyaya yeUS comic magazini "Detective Comics" - nhasi DC uye Batman ndiye anonyanya kufarirwa hunhu hwemuparidzi. Muparidzi Dorling Kindersley (DK Verlag) anopemberera chiremwaremwa necompendium "DC Batman - The World of the Dark Knight".
Zvese zvevateveri pamapeji anopfuura mazana maviri
Batman chave chikamu chakakosha chetsika yepop: asingaverengeki mafirimu, akatevedzana, mabhuku, makomiki nemitambo inotaurira kana nyaya dzemunhu kubva kuGotham Guta, iyo mega-metropolis pamusoro payo Batman nemumwe wake alter ego Bruce Wayne vanobata maoko avo akashongedzwa nekudzivirira. Anecdote: "Batman" anga asiri chiremwaremwa pakutanga - Bob Kane akafungidzira gamba seshiri ine mavara ane tag yeziso. Izvozvo hazvina kunyatsobudirira. Kubatira pamwe chete nemunyori Bill Finger ndiko kwakaita kuti zvinhu zvipere. Munwe hauna kutaurwa kwenguva refu.
Mamwe anecdote: Batman alter ego Zita raBruce Wayne harina tsaona, asi rinobva mumazita emagamba maviri: murwi wehondo yerusununguko wekuScotland Robert the Bruce negamba renyika yeUS Mad Anthony Wayne.
Tsanangudzo yeiyi nhanho inogona kuwanikwa mumutauro wechiGerman anthology pabat, iyo inodzokera kumashure ekubatana pakati pevabudisi DC neDK. Zvakakodzera kuti titarise bhuku remapeji 216 ane butiro rakaomarara - kunyanya kune vateveri. Seri kweiyi pfungwa kune munyori Matthew K. Manning, nyanzvi yemakomiki anozivikanwa uye akabatanidzwa mumabhuku anodarika makumi mapfumbamwe uye akawanda emabhuku ekomiki. Akashandirawo DC neMarvel, asi chinonyanya kukosha pamubatanidzwa uyu hunyanzvi hwakawanikwa naManning kubva pakunyora mabhuku ezvemakomiki. Huwandu hweruzivo nezve Batman, shamwari dzake uye vavengi vake hwakatsvagirwa nenzira inoenderana-yakavakirwa.
Kwete Batman chete ndiye anotarisa, asiwo vadzivisi vake. Mufananidzo: Volkman
Iri bhuku rine ruzivo rwakajeka uye zvekutarisira - nhumbi dzeBatman dzinotaridzika sei uye nei dzichiita senge kana: Chii chakaitika kuvabereki vaBruce Wayne? Asi zvaisafanira kunge zvakadaro. Zvingango shamisa zvakawanda zvinogona kuwanikwa pamapeji anopfuura mazana maviri ebhuku, akazadzwa kusvika kumuromo nemifananidzo yekutanga yekomiki. Iri nezve ane mukurumbira Arkham Asylum, nezve Batman nemwanakomana wake - uye zvakare nezve "Ace", iyo Bat-Imbwa. Zvimwe zvinoshamisa, zvimwe zvinosetsa. Chero zvazvingava, kutarisa kuburikidza necompendium kunonakidza zvikuru. Peji nepeji pane chimwe chinhu chitsva chekuwanikwa, chakakamurwa kubva kunguva yegoridhe yemakore ekuma200 nema1930 kusvika kunguva yanhasi.
Shanduko iyo Bruce Wayne nebheti, asiwo shamwari dzake nemhandu dzakaitika kwemakumi emakore zvinokatyamadza. Chiremwaremwa chegrey-blue, icho chakadhirowewa zvine hudzamu, chave chitema chine mhasuru. Nekudaro, chinhu chimwe chakamirira mutsivi werima kubva pakutanga uye chichiripo nanhasi: zvisingaverengeki - zvakanyanya kana zvishoma zvinobatsira - zvishandiso izvo Batman anofanira kudonhedza pazviri pasina masimba makuru chaiwo. Kune zvakare zvakawanda zvinowanikwa mu "DC Batman - The World of the Dark Knight". Bat grenades, pellets inoputika, mabataranga akasiyana-siyana - kune info bits uye madhirowa ezvishandiso zvese zvinopenga. Iyo Batmobile uye nekumwe budiriro kwayo inowanawo nzvimbo.
Kune ruzivo rwakawanda - kubva kubheti kusvika kune zvombo zvebheti. Mufananidzo: Volkman
Zvinonyanya kunakidza kana Batman's Metaverse adventures inotariswa. Vakanga vasingangoshamisi, dzimwe nguva vaitonetsa kunzwisisa. Iyo compendium inoitawo basa rekudzidzisa kana zvasvika pakurongedza nyaya dzechiremwaremwa uye mavara akadai seReverse Flash, Batman anobva kuZur-en-Arrh kana White Lantern muDC worlds.
Pane akati wandei mazano anoita kuti unyemwerere, ukapihwa hukasha hwausingazotendi chiremwaremwa uye anochengetedza alter ego seavhareji mafeni. Pakupedzisira, shanduko dzakawanda uye kugadziridzwa kwekatuni hunhu pamwe ndicho chinhu chakakosha mukubudirira kwayo. Zvinhu hazvina kufinha naBatman kwemakumi emakore. Chiremwaremwa, semunhu akanga asinganzwisisike, aisambonzwa tsitsi. Achisundwa nemabasa ake uye akashongedzerwa dzimwe nguva tsika dzisina chokwadi, chiremwaremwa hachina kumbova nemufananidzo wemurume akachena weSuperman. Batman igamba rine mipendero yakashata - iyo compendium inoratidza pamapeji ayo mazana maviri zvinokatyamadza kuti sei uchifanira kuda "The Batman" mukupedzisira zvisinei nekukanganisa kwayo.
Kubhurawuza rwendo rwemunguva yakapfuura. Mufananidzo: Volkman
Kunyanya, kumashure kwechimiro uye zvikonzero zvezviito zvake zvinomutsa kufarira. Bhuku rinonzi "Batman - The World of the Dark Knight" rakanyorwa naDK Verlag rinoshandisa chido ichi. Mamiriro emagariro-akakosha emakumi emakore akateedzana anoonekwa zvakare uye zvakare: kufa nekumuka, urombo, feminism - nyaya dzakawanda dzinoenderana nemagariro dzinogona kuwanikwa mukushanya kwaBatman. Kana iwe ukanyora nyaya dzemunhu wakasununguka, unenge wakangofuratira kwakawanda kwekutsoropodza kwevanhu mukupedzisira. Mubatanidzwa unoratidza pekutarisisa zvakanyanya.
Vhoriyamu: 216 mapeji
Muparidzi: DK Verlag / Penguin Random House
Shanduro: Joachim Körber, Christian Heiss (edition 2012)
Gore rekuburitswa: 2022/2012
Mutengo: 22 euros
Batman igororo - dzimwe nguva zvakadaro. Uye kana iwe wakapenengura mapeji mazana maviri negumi nematanhatu emuunganidzwa uchangoburitswa, uyo nenzira ine zita rekutanga reChirungu "Batman - The Ultimate Guide New Edition", unogona kupembedza maonero ako. Pakupedzisira, zvishoma zvasara zvechiremwaremwa chinodiwa, icho chakanaka. Kashoma chero gamba recomic rinopokana, rine zviso zvakawanda kunyangwe mask, yakaoma uye saka inonakidza. Iyo Batman Compendium inobvisa hunhu, inofumura gamba - asi panguva imwechete inogara ichiratidza kuti sei Bruce Wayne naBatman vari kumagumo zvisingarambike pakati pevakomana vakanaka.
Hapana chekunyunyuta pamusoro pemhando yemhando, kupihwa chiyero uye gadziriro yekunyora "kusvika padanho" kusanganisira yakabudirira mapeji magadzirirwo, munhu angangoita kufunga kuti compendium, iyo inodhura 22 euros, iri kutengesa pazasi kukosha kwayo. Mharidzo uye zvirimo ndezvemhando yepamusoro, ruzivo rwakawedzera kukosha kunyangwe kune venguva refu mafeni ebheti. Kashoma zvave zvichinakidza kudaro kusiya peji rekubatanidza nepeji. Uye hazvishamisi kuti munhu azvibate achiverenga nepfungwa yekuti imwe kana imwe nyaya yekare yemakomiki inoita seyakajairwa. "DC Batman - The World of the Dark Knight" kubva kuDK Verlag inopa rwendo rushoma kuburikidza nenguva kuva fan.
DC Batman™ Nyika yeRima Knight: Inoratidzira pamusoro pe800... * 22,00 EUR tenga
DC Batman - iyo nyika yerima knight
pfupiso DC Batman - Nyika yeRima Knight ibasa rakazara sekukwezva kwariri. Panyaya yezvirimo, inoshaya zvishoma, mharidzo inoita zvimwe zvese kuti vaverengi varambe vachikurudzirwa kuvhura mapeji anopfuura mazana maviri ane mavara. Yakakurudzirwa vateveri veBatman uye avo vanoda kuve mumwe.
Kare PUBG: Nzvimbo dzekurwira ikozvino nekuvandudza 17.1 kune ese mapuratifomu
Inotevera Bhodhi mutambo wongororo yeSencha: Edo Period Trading Game
Wongororo yehurongwa hwemutambo wevhidhiyo PaMagedhi
Retro ine musiyano: Remake yeZelda: Link's Awakening yakaburitswa Nintendo Chinja
Nyika Itsva: New trailer yeAmazon MMO
Metal Gear Solid yePlaystation 5: Youtube inodonha inoratidza kugadziridzwa